Burcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay si ay ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBurcadbadeeda Soomaaliya oo afduubtay dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay si ay ugu ugaarsadaan maraakiibta ganacsi
Asbuucyadii lasoo dhaafay, burcadbadeeda Soomaaliya ayaa kordhiyay weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee gooshaysa biyaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah afduubtay dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay si ay ugu adeegsadaan in ay ku ugaarsadaan maraakiibta ganacsi ee waa-weyn oo gooshaysa biyaha Soomaaliya, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa guddoomiyaha magaalada Xaabo.
“Koox burcadbadeed ah oo Soomaali ah ayaa qabsaday dooni kalluumaysi oo Iran laga leeyahay waxayna u isticmaalayaan sidii ay ugu afduuban lahaayeen maraakiibta waa-weyn,” guddoomiyaha magaalada Xaabo Cali Shire ayaa sidaa u sheegay Reuters.
“Doonida kalluumaysi ee Iran laga leeyahay ruqsad kalluumaysi kama aysan haysan gudaha Puntland.” Ayuu ku daray guddoomiye Cali Shire.
June 27, 2017 Qarax laga maqlay markab ku sugan xeebaha Puntland